काेराेनाकाेबाट बच्न इम्यिुनिटी पावर बढाउन सकिन्छ – Durbin Nepal News
बैशाख १७, २०७७ २:५४ मा प्रकाशित
प्रमिता दाहाल/राेशन खड्का
अहिले हामी काेभिड -१९ अर्थात काेराेना भाइरसको महामारीकाे सङ्कटबाट गुज्रिएका छाै । याे लेख तयार पार्दा सम्म यसबाट संक्रमितकाे संख्यामा कमी होइन वृद्धि भइरहेको छ । हामी विश्वको सर्वशक्तिमान् र वैभवशाली देशमा छाै । तर विडम्बना अमेरिकामा हालसम्म ५६ हजार भन्दा बढी मानिसहरूको काेराेनाभाईरसकाे कारण मृत्युवरण गर्नुपरेकाे छ भने संक्रमितकाे संख्या पनि दश लाखबाट नघिसकेको छ ।
हामी पनि संक्रमणकाे सिकार हुन बेर छैन । हालसम्म यसकाे खाेप बनिसकेकाे छैन। कम्तिमा पनि खाेप बन्न एक वर्ष देखि अठार महिना लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसबाट बच्न सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि अत्यावश्यक समानका किनमेलका क्रममा कहिँ न कहिँ कुनै दिन यसकाे संक्रमणमा नपरिएला भन्न सकिन्न। अहिले सम्म संक्रमित र मृत्यु हुनेहरूको आँकडालाई हेर्दा ईम्युन सिस्टम कमजोर भएका, सुगर, ब्लडप्रेसर तथा दम लगायत रोग भएका मानिसहरू यसकाे निशानामा परेका छन्।
यस आलेखमा हामीले आयुर्वेद/जडिबुटी लगायतका बनस्पतिजन्य उत्पादनहरूले कसरी हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई बढाउन सक्छौ र शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व लगायतका पदार्थहरू प्राप्त गर्न IVed ले कसरी मद्दत पुर्याउँछ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौ । कसरी ईम्युन पावर बढाउने ? जीवनमा खुशी र सन्तुष्टि एंव स्वस्थ रहनका लागी पैसा भए मात्र पुग्दैन । पैसा छ, स्वास्थ्य ठिक छैन भने हामी सुखी जीवन बिताउन सक्दैनौ । यसकारण ” हेल्थ ईज वेल्थ ” भनिएकाे हाे। कसरी जिवनलाई खुसि राख्ने त ? अमेरिकामा बस्ने तपाई हामी सबै नेपालीहरु काम गर्छौँ, जेनतेन पैसा कमाउँछौँ। तर हाम्राे स्वस्थ जीवनमा हाम्राे खानपान भूमिका कस्तो छ त ?
संसारमा धेरै दिर्घराेगहरु मानिसको खानपानको कारण हुने गर्छ। हामिले दैनिक खाने खानामा के/कति/कसरी खान्छौँ भन्ने कुराले नै हाम्रो स्वास्थ्यको निर्धारण गरेकाे हुन्छ । यिनै तथ्यगत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर Indusviva कम्पनीले अमेरिकामा Ived आयुर्वेदिक Herbal supplement बजारमा ल्याएको छ । आयुर्वेदका इतिहास आज भन्दा झण्डै पाँच हजार वर्ष अघिको हाे। संसारमा ‘एलाेपेथिक’ औषधीको उत्पादन पूर्व आयुर्वेद नै अचूक औषधी थियाे । याे त हामिले आफ्नै पुर्खाहरूलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । उहाँहरु स्वस्थ निरोगी र हट्टाकट्टा हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालकाे कुरा थिएन। आज त्यही आयुर्वेद हाम्रो लागी ‘सन्जिवनी’ हुँदै गइरहेको छ । पश्चिमाहरूले आयुर्वेद,याेगाभ्यास र पूर्वीय संस्कृतिलाई अपनाउन थालेका छन्।
I Ved के हाे ? यसले के गर्छ ?
जापानमा सन् २००७ मा स्थापना भई भारतको Indus Viva health science अन्तर्गत सन् २०१४ बाट यसले आफ्नो आयुर्वेदिक उत्पादन सुरु गरेको हाे। याे कम्पनीले अहिले १५ वटा देशमा आफ्नो उत्पादन र बिक्री वितरण बिस्तार गरेको छ। नेपालमा I plus काे नामले यस कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेको छ। Ived प्रयोग बाट के के फाइदा हुन्छ त ? हामिले विगत केही महिनायता प्रयाेग गरेकाे अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा यसले शरीरमा भएका यावत् किसिमका राेगहरुकाे कमी गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
IVed काे नियमित सेवनले निम्न प्रकारका रोगीहरूलाई आफनाे राेग सगँ लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरेकाे बताईएको छ । मुटु, कलेजाे, फाेक्साे नशा, पेट मृगाैला IVedकाे सेवन बाट शरीरलाई अत्यावश्यक रुपमा चाहिने Antioxident काे मात्रा प्राप्त हुन्छ। जसकाे कारण शरीरलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । हामिले Ived सेवन गर्नपूर्व एङ्जाईटीकाे आौषधी प्रयाेग गरेका थियाैँ ।यसले शरीरमा भएकाे ‘एङ्जाईटी’ पनि निर्मूल गर्न सहयोग गर्छ। तर अहिले त्याे समस्या समाधान भएकाे छ ।
IVed ले इम्युनिटी पावर बढाउन सहयोग गरेको सेवनकर्ताहरुकाे अनुभवबाट सिद्ध भएकाे छ। हालै टेक्सासमा भएकाे एक घटना अनुसार पाँच जनालाई गरिएकाे स्वावटेस्टमा चार जनालाई पाेजेटिभ देखियाे भने एक जनामा देखिएन किनभने उसले IVed सेवन गरेकाे पाईयाे। IVed ले श्वासप्रश्वास सगँ लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउछ। यसले क्यान्सर जस्ताे राेगसगँ लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाएकाे नियमित प्रयाेगकर्ताहरुकाे अनुभव छ । यसले आलश्यता घटाउने, निन्द्रा नलाग्ने र छाला सम्बन्धी राेगहरु लाग्न बाट पनि बचाउने काममा IVed प्रभावकारी हुँदै गएकाे छ।
भारत र नेपालमा उल्लेखिय प्रभावकारिता पाए सगैँ Indusviva ले यहि अप्रिल बाट अमेरिकाकाे टेक्सास राज्यकाे ह्युस्टनबाट आफ्नाे बिक्रीबितरण सुरु गरेकाे छ ।IVed अन्य आयुर्वेदकाे तुलनामा केहि महगाें भए पनि दिर्घजिवन र स्वास्थयपानकाे लागी याे एकदमै प्रभावकारि र उपयाेगी छ । याे हामि आफैले अनुभवकाे आधारमा भनेका हाै। ‘इम्युनिटी’ पावर बढाउनु यति बेलाकाे महत्वपुर्ण चुनाैति हाे । जति धेरै हामि ‘इम्युनिटी’ पावर बढाउछाै त्यति बेला मात्रै हामि काेराेना भाईरस बाट सुरक्षित रहन सक्छाै । शरीरलाई चुस्त, तन्दुरुस्त र स्वस्थ बनाउनु नै आजकाे प्रमुख बिषय हाे। काेराेना महामारी बाट आफुँ पनि बचाैँ र अरुलाई पनि बचाआौ । कुनै उत्पादनको प्रचारात्मक उद्देश्यले यो लेखिएको होइन । यस्तै स्वास्थ्य बर्दक र मानव स्वास्थ्यका लागि बहुफाइदाजनक आर्र्युरबेदिक उत्पादनको बारेमा जानकारी मूलक सन्देश लिएर हामी आउने छौं । हाम्रो लेख र सन्देशमा कुनै प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई इमेलबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामिलाई pramitadahal321@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
(लेखिकाद्वयका निजी अनुभव र बिचार हुन् – सम्पादक)
बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि